Accueil > Gazetin'ny nosy > Miaramila : Tsy mahazo manararaotra ny fokonolona
Maro ny mponina na ny fokonolona any anivon’ireny tany anjakan’ny dahalo ireny ka nandefasan’ny mpitondra fanjakana mpitandro ny filaminana no mitaraina satria ianjadian’ny fanararaotan’ny mpitandro ny filaminana. Matetika moa dia miaramila no alefan’ny mpitondra fanjakana any amin’ireny toerana ireny mba hampandry tany, hono. Dia misy amin’ireny miaramila ireny no manery ny fokonolona hiantoka ny sakafony, ary matetika dia zavatra ambonin’ny sakafo mihitsy no takian’izy ireny.
Hentitra ny minisitry ny fiarovana omaly fa “tsy azo ekena ny fisian’ny miaramila manery na mangataka solon-tsakafo amin’ny fokonolona any amin’ny toerana anaovany fampandrian-tany”. Notsindrian’ny minisitry ny fiarovam-pirenena fa “efa ampy ho azy ireny ny solon-tsakafo omen’ny tompon’andraikitra azy ireny”.
Marin-doatra ny filazan’ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny tsy tokony haneren’ny miaramila mangataka solon-tsakafo amin’ny fokonolona. Raha fitiavan’ny fokonolona manokana ny hanampy ny mpitandro ny filaminana na ira-panjakana hafa, dia tsy olana izany.
Etsy ankilany kosa anefa, tokony hampanao fanadihadiana ihany ny mpitondra fanjakana satria misy amin’ireny miaramila nalefa hitandro ny filaminana ireny ange no tsy naharay ny solon-tsakafony avy amin’ny filohampirenena mihitsy, na ampahany kely amin’izany solon-tsakafo izany ihany no tonga any aminy e!
Sao lahy ka ny any amin’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena any kosa no misy manodinkodina ny solon-tsakafon’ny miaramila fa tsy marina 100% ny hoe “ampy ho an’ireny miaramila ireny ny solon-tsakafo omen’ny fitondrana azy”.
Ny fokonolona any ambany ravin-kazo any moa izany dia valala voatango e! Tsy tongotra hitsipaka, tsy tanana handrangotra, ary tena very fanahy mbola velona ara-bakinteny e! Ny tsy fandriampahalemana efa mampijaly azy, ny mpitandro ny filaminana koa manararaotra azy, ny mpitondra manakenda ny sakafon’ny miaramila. Izany no mahatonga ny mponina sasany milaza hoe “aleonay mifanehitra amin’ny dahalo noho izany mifanena amin’ny “vazaha” (miaramila).”
Akom-baovao samihafa : Ambasady malagasy ao Paris
Kidnapping – Ambatofinandrahana : Aiza Razanamahasoa Christine ?
Jirama : Nanjavona ny faktiora roa volana farany
CUA : Tara ny fandraisana andraikitra
Inty sy Nday : Simbain’ny mpitondra ny ho avin’ny firenena
Antoko Tgv : Tsy matotra
Fanotorana tany : Fantaro ireo nahavanon-doza
Ambatondrazaka : Nidoboka am-ponja ny ben’ny tanàna
Inty sy Nday : Naboridan-dRadanoara i Patrick Rajoelina
Ambatokely-Ambanitsena : Dibo-drano noho ny fanotorana tany tsy ara-dalàna